Misaotra ny filoham-pirenena nandray andraikitra hatrany amin'izao ady amin'ny coronavirus izao. Ankasitrahana ny filazana ny marina hatrany sy ireo fepetra tsy maintsy raisina manoloana izao toe-draharaha izao.
Efa eto ny aretina, misy ireo voa, misy no efa hita tamin'ny fitiliana, ary misy ireo manodidina azy ireo no efa nandraisana fepetra sy natoka-monina.
Ny ahiahy tsy ihavanana, ny sisin-dranomasintsika midadasika, mety misy ihany koa izao vao mety miseho ny soritr'aretina nefa tsy hita tamin'izany. Ka tsara raha apetraka ny barrière sanitaire na fitiliana hafanana fotsiny ihany aza amin'ny lalam-pirenena sy ireo lalana lehibe. Atokana avy hatrany ireo misy fambara hafanana, raisina ny mombamomba ireo mpandeha tafaraka taminy arahi-maso. Asiana fanafody ny kodiaran'ny fiarakodia.
Diovina fanafody ny arabe rehetra, anaovana ezaka manokana ny fahadiovana, ny fanalana ny fako, samy tompon'andraikitra isika rehetra tsy
samedi, 21 mars 2020 10:01
Tahotra Coronavirus: Lany ny vary, menaka, hifandrombahana ny voasary makirana
Vao maraina dia nirohitra avokoa ny olona hividy vary, menaka, patte, taratasy fifafana, mouchoire, fa ny tena hifandrombahana ny voasary makirana, ny tongolo gasy, ny raokandro, ny kininim-potsy, ravitsara, ny tantely.
Tapitra tsy misy avokoa ireo entana ilaina ao an-tsena, ny atody, ny drakaka, ny voatabia sy ny salady no tsy misy mpanontany.